Talaado 21 Bisha Sagaalaad 2021
Pendant Midowga Midoobey ee Olga Yatskaer, taariikhyahan xirfad leh oo go’aansaday inuu sii wado xirfad cusub oo nashqadeeyaha dahabka ah, wuxuu umuuqdaa mid fudud oo macno buuxa leh. Qaar waxay ka heli karaan taabashada dahabka Celtic ama xitaa garabka Herakles. Qaybtu waxay matalaysaa hal qaab aan dhammaad lahayn, oo u eg laba qaab oo isku xidhan. Saameyntan waxaa lagu abuuray khadadka grid-like-ka ku xardhan qeybta. Si kale haddii loo dhigo - labada ayaa isku xidhan sida mid, iyo kan waa midowga labada.
Jaakad Xirashada Isku Laabashada Hilqado Dhuuban Oo Pendant Ururinta Dahabku Kuleylku